ကံင်မျူဏ်ုတီ သာ့အှ်စ်ုရင့် ဆာၜေ့ ၂၀၁၉ - Meta
ကံင်မျူဏ်ုတီ သာ့အှ်စ်ုရင့် ဆာၜေ့ ၂၀၁၉
Submit, discuss and revise proposals: က္တုဂ်ဝဝ်ႋ ၂၉ ခါ့မါလ်ုကာ လါဏင့် ၁၁ ထံင်, ၂၀၁၈
Community Tech reviews and organizes proposals: လါဏင့် ၁၃ ခါ့မါလ်ုကာ လါဏင့် ၁၅ ထံင်, ၂၀၁၈
Vote on proposals: လါဏင့် ၁၆ ခါ့မါလ်ုကာ လါဏင့် ၃၀ ထံင်, ၂၀၁၈
Results posted: လါလိင် ၃, ၂၀၁၈
What is the Community Wishlist Survey?(ခၠယ့်လာႋ)
အ်ုယိုဝ် မွာဲဝေ့ဍး ကံင်မျူဏ်ုတီသာ့အှ်စ်ုရင့်ဆာၜေ့ လီႋၜၠင်ထင်းၜါဏိင်းက္ဍဆေဝ်ႋလှ်။ ယောဝ်ႋ ထ်ုလယ့်ခိုက်ဏိင်းခါ့ ဟ်ုဆ်ုသာ့အှ်သ်ု ခဝ့်လယ်.
သာ့အှ်စ်ုရင့် ၂၀၁၈ ခါ့ ၜးကဲထင်း ဆ်ုဏှ်လယ်။
ကိုဝ်ဏိင်း ဏိင်းအ်ုထုက် ဟ်ုဖံင်ခိင်ႋထဆ​ၜေ့ လါဏင့်သီး ဏင်းဏိင်းအ်ုဆိုင့်အ်ုထဝ်ႋၯင်ႋ ခ်ုဖိင့်က်ုဆာ ဆ်ုဟ်ုသာ့ဆ်ုမာဏှ် ကျုဂ်ပျုဂ်ဟ်ု မ်ုၯယ့်ဏါင်ဏိင်းထ်ုမၞာလှ် လာဏင့်သီး မ်ုဟ်ုသာ့အှ်ဏှ် ဟ်ုမာ​ဝေ့လှ်။ သာ့အှ်စ်ုရင့် ဆာ​ၜေ့ဏှ် ဟ်ုမာ ၂၀၁၆ ခါ့ လ်ုမွာဲ ၂၀၁၇ ခါ့ ဟ်ုမာဖှ်ေ ၯေဝ်ၯေဝ်ၜးၜး ထံင်လ်ု ၂၀၁၈ ခါ့ မၞီႋသ်ုအေၯယ့်ၜးစာ်ၜိုဝ် မ်ုဍးဟ်ုလ်ုအ်ုအိုင်ခဝ့်သှ်ေဆေဝ်ႋလှ်။ ၜေ့ဏှ်သိုဝ် အှ်ကှ်ေ ကါင်ဖါဟ်ုဏှ် ဏင်းဏိင်းဏင်းဏိင်းဍဝ်ၯင်ႋ ၜေ့ဟ်ုဆ်ုမာမ်ုဍောဟ်ယှာထင်းထဝ့်သိုဝ် ဖှ်ေၯာင်ႋဖှ်ေ ၜျာဟ်ုသိုဝ် ဆေဝ်ႋလှ်။ ဟ်ုဆာၜေ့ဖံင့်ခေါဟ် အ်ုဏိင်းလ်ုယာ့ ဖံင်ခိင့်ထးမာလ်ုကာ အ်ုဏိင်းအးအး မ်ုဖံင်ခိင့်ဏှ် ခၠိုဝ်လင်သါဝေ့ဆေဝ်ႋလှ်။
What happens during the proposal phase?(ခၠယ့်လာႋ)
Can I resubmitaproposal from previous surveys?(ခၠယ့်လာႋ)
What happens during the voting phase?(ခၠယ့်လာႋ)
What about smaller projects and user groups?(ခၠယ့်လာႋ)
Why are some proposals declined?(ခၠယ့်လာႋ)
What ifalot of people vote to supportabad idea?(ခၠယ့်လာႋ)
Why are we doinganew survey this year…(ခၠယ့်လာႋ)
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Community_Wishlist_Survey_2019/kjp&oldid=22194120"